Kofehy ho an'ny akanjo akanjo vita amin'ny lamba lamba an-trano
Kofehy knitting: Polyester / landihazo / acrylic / volon'ondry kofehy knitting dia misy amin'ny loko isan-karazany sy ny hateviny manomboka amin'ny mahia ka hatramin'ny chunky. Ny isan'ireo kofehy akrilika dia misy kofehy vaovao ihany koa ao anatin'izany ny kofehy metaly, pom-pom, frizzy ary olioly
Mety amin'ny tetikasa maro isan-karazany ao anatin'izany ny akanjon-jaza, akanjo, lamba firakotra, ondana, kilalao, satroka, fehiloha ary fonon-tànana. Ireo entana vita amin'ny kofehy akrilika dia azo sasana ary mahazo aina amin'ny hoditrao.
Cotton Embroidery Floss: Kofehy landihazo lava 100% dia misy loko sy isa feno, ao anatin'izany ny kofehy vita amin'ny kofehy, kofehy vita amin'ny hazo fijaliana, sns.
Mety amin'ny fanaovana entana, lamina, tetik'asa ary kojakoja isan-karazany ao anatin'izany ny doily, biby feno entana, lamba firakotra zazakely, saribakoly, firazanana an-tariby, rojo fanalahidy ary fanomezana maro hafa.
Kitapo kofehy manjaitra: Izahay manana kitapo fanjairana amin'ny kofehy fanjairana polyester, kofehy amboradara, kofehy metaly volamena na volafotsy, kofehy fotsy na mainty mangarahara.
Mety amin'ny zaitra tanana, zaitra milina, stitch cross, DIY, amboradara, fanjairana, fanenomana ary maro hafa!
Kofehy vita amin'ny tanany polyester
100g Ball Acrylic Knitting Yarn
40g Volon'ondry amin'ny knitting
Kofehy vita amin'ny landy
0.15MM 150M Famonosana Tube kely an'ny Thread ny Nylon
25M-paosy kely vita amin'ny paosy metaly
Zaza Knitting Knight
Kitapo kely amin'ny 100% polyester embroidery thread 1000M
300D / 2 Tandroka kely amin'ny 100% viscose rayon embroidery thread